musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Southwest Airlines inozivisa Mutungamiriri mutsva
Mike Van de Ven akadomwa seMutungamiriri weKambani, achishanda nekukasira.
Gary Kelly, Sachigaro weSouthwest uye CEO, vakazivisa vakamirira Southwest Airlines Board of Directors kuti Chief Operating Officer Mike Van de Ven, makore makumi mashanu nemapfumbamwe, akashevedzwa saMutungamiri weKambani, achishanda nekukasira. Van de Ven vachatora mamwe mabasa eKambani Yemukati Ekuongorora, Bhizinesi Kuenderera mberi, Emergency Response, uye Enterprise Risk Management mabasa.
Shanduko dzehutungamiriri dzakaziviswa kuSouthwest Airlines.
Tom Nealon afunga kurega pamabasa ake seMutungamiri anoshanda nekukasira.
Southwest Airlines Co yazivisa hutungamiri shanduko nhasi.
Tom Nealon, 60, asarudza kusiya basa rake seMutungamiriri anoshanda nekukasira, asi acharamba achishandira Kambani semupi wezano, achitarisa zvakanyanya pakuchengetedzwa kwenzvimbo yendege uye nehurongwa hwekudzora mweya. Nealon akabata nzvimbo dzakawanda dzehutungamiriri panguva yaakabata nendege, kusanganisira Executive Deputy President Strategy & Innovation kubva muna 2016 kusvika 2017, Director paSouthwest Board kubva muna 2010 kusvika 2015, uye neanobata basa seMutevedzeri Mukuru weMutungamiri uye Chief Information Officer kubva muna 2002. kusvika 2006.
"Ndiri kukudzwa kuve ndakashanda kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero mumakore ese munzvimbo dzakasiyana siyana, uye kunyanya kuve Mutungamiriri wendege yakanakisa mubhizimusi," akadaro Nealon. "Ndiri kutarisira kuenderera mberi nekushandira nekupa mazano kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero pane zvirongwa zvine hungwaru, uye zvakanyanya kukosha, pane zvirongwa zvenguva refu zvekuchengetedza nharaunda."
Gary Kelly, Sachigaro weSouthwest uye CEO, yakaziviswa panzvimbo ye Southwest Airlines Board of Directors iyo Chief Operating Officer Mike Van de Ven, makumi mashanu nemapfumbamwe, akashevedzwa saMutungamiriri weKambani, anoshanda nekukasira. Van de Ven vachatora mamwe mabasa eKambani Yemukati Ekuongorora, Bhizinesi Kuenderera mberi, Emergency Response, uye Enterprise Risk Management mabasa.
“Ndinoda kutenda Tom nemipiro yake isingaverengeki kuchinangwa icho chiri kuSouthwest Airlines mumakore apfuura — zvakawanda uye hazvikwanisike. Ndiri kuonga Tom acharamba achishanda semubatsiri wezano. Ndiri kufara naMike sezvaanotora chinzvimbo chake chitsva seMutungamiri, kuwedzera kuCOO. Mike ane tarenda uye akazvipira semutungamiri sekuwana kwaachawana, uye akabatsira zvakananga mukubudirira kweSouthwest mukati memakore ake makumi maviri nemasere achishandira Kambani nevanhu vedu.
"Kuyedza kwekuchinja kuri kutungamirwa neMutevedzeri Wemutungamiriri wenyika uye CEO vauya Bob Jordan kuri kufamba zvakanaka chose, uye sezvo izvo zviri kuenderera mberi, tiri kutora matanho ekuchinja mabasa ekuzivisa mukugadzirira Bob kutora chinzvimbo cheCEO muna Kukadzi 1, 2022," akadaro. Kelly.
Sezvo shanduko ichienderera, zvikwata zveMari, Zvekutengeserana, Zvemutemo & Zvekudzora, Zvekuita, uye neTekinoroji izvo zvaive zvichishuma kuna Kelly kana Nealon zvino zvichamhan'ara kuJordani, zvakare zvinoshanda nekukasira.
"Pachinzvimbo cheBhodi reVatungamiriri, ndinoda kutenda Tom nezvegore rake rinosvika mashanu seMutungamiri uye makore anodarika gumi neshanu ebasa kumaSouthwest Airlines Employees, Vatengi, Varidzi vemasheya, uye Nharaunda dzatinoshandira," akadaro. Maodzanyemba Akadziva kumadokero Airlines Mutungamiri Director William Cunningham. "Tinodada zvikuru kuva nebhenji rine hunyanzvi uye rakasimba rehutungamiriri kuSouthwest Airlines, uye tinofara nekuziviswa kwaMike Van de Ven semutevedzeri waTom."